यहोवा परमेश्‍वरले मोशालाई प्रयोग गरेर व्यवस्थाको युगको काम गर्नुभयो। परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न किन कसैलाई प्रयोग गर्नुहुन्न? उहाँ किन देह बन्नैपर्छ र त्यो काम उहाँ आफैले गर्नैपर्छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
यहोवा परमेश्‍वरले मोशालाई प्रयोग गरेर व्यवस्थाको युगको काम गर्नुभयो। परमेश्‍वरले आखिरी दिनहरूको न्यायको काम गर्न किन कसैलाई प्रयोग गर्नुहुन्न? उहाँ किन देह बन्नैपर्छ र त्यो काम उहाँ आफैले गर्नैपर्छ?
अघिल्लो: अनुग्रहको युगको दौरान, परमेश्‍वर देह बन्नुभयो र मानवजातिका लागि पापको एउटा बलिको रूपमा काम गर्नुभयो, त्यसरी मानवजातिलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो। परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूमा फेरि देह बन्नुभएको छ। उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ र न्यायको काम गर्नुहुन्छ, यसरी मानवजातिलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्नुहुन्छ र मानवजातिलाई शैतानको प्रभावबाट बचाउनुहुन्छ। मानवजातिलाई मुक्ति दिने काम गर्न उहाँ किन दुई पटक देह बन्नु पऱ्यो? यी दुई देहधारणको वास्तविक महत्त्व के हो?
अर्को: बाइबलमा जे लेखेको छ त्यसअनुसार, प्रभु येशू देह बन्नुभएका ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तैपनि तपाईं देहधारी ख्रीष्ट नै देखा पर्नुभएका परमेश्‍वर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयम् परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भनी गवाही दिनुहुन्छ। यदि प्रभु येशू स्वयम् परमेश्‍वर हुनुहुन्छ भने प्रभु येशूले पितासँग कसरी प्रार्थनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ? देहधारी ख्रीष्ट परमेश्‍वरका पुत्र हुनुहुन्छ कि परमेश्‍वर स्वयम् हुनुहुन्छ?
अनुग्रहको युगको दौरान, परमेश्‍वर देह बन्नुभयो र मानवजातिका लागि पापको एउटा बलिको रूपमा काम गर्नुभयो, त्यसरी मानवजातिलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो। परमेश्‍वर आखिरी दिनहरूमा फेरि देह बन्नुभएको छ। उहाँले सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ र न्यायको काम गर्नुहुन्छ, यसरी मानवजातिलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध पार्नुहुन्छ र मानवजातिलाई शैतानको प्रभावबाट बचाउनुहुन्छ। मानवजातिलाई मुक्ति दिने काम गर्न उहाँ किन दुई पटक देह बन्नु पऱ्यो? यी दुई देहधारणको वास्तविक महत्त्व के हो?
सन्दर्भका लागि बाइबल पदहरू: “यसरी धेरैको पाप बोक्‍नको लागि एकपटक ख्रीष्टको बलि चढाइयो; र उहाँलाई पर्खिनेहरूका निम्ति उहाँ पापरहित रूपमा...